Wararka - Sida Loo Xulo Filter Haanta Kalluunka Ku habboon
Biyaha Sifeeyaha RO Pump
Bamka Qaboojiyaha Hawada
Sida Loo Xulo Filter Haanta Kalluunka Ku habboon
Marka la barbardhigo deegaanka dabiiciga ah, cufnaanta kalluunka ku jira aquarium-ka aad ayey u weyn tahay, kalluunka saxarada iyo hadhaaga cuntada ayaa ka badan. Kuwani waxay jajabiyaan oo sii daayaan ammonia, oo si gaar ah waxyeello ugu leh kalluunka. Qashinka badan, ammonia badan ayaa soo baxda, oo si dhakhso leh ayay tayada biyuhu u noqotaa. Miiraha ayaa nadiifin kara wasakheynta biyaha ee ay keento saxarada ama sedka haraaga ah, oo si wax ku ool ah u kordhiya oksijiin ku milmay biyaha. Waa mid ka mid ah aaladaha aan lagu waayi karin habka quudinta.
Miiraha sare macnihiisu waa nidaamka sifeynta dusha sare ee haanta kalluunka, oo waliba run ah.
Sharciga shaqada ee sifeynta kore ayaa ah in bamka biyaha lagu dhex ridi doono haanta shaandhada, ka dibna dib ugu laaban doono haanta kaluunka iyada oo loo marayo noocyo kala duwan oo ah qalabka miirayaasha iyo suufka miiraha. Kadibna waxay dib ugu laabanaysaa haanta kaluunka ee tuubada ka soo baxda xagga hoose.
1. Qiimo jaban
2. Dayactir maalinle ah oo ku habboon
3. Saamaynta sifeynta jirka waa mid aad ufiican
4. Looma baahna boos gooni ah
1. La xiriirida hawada inbadan, kaarboon laba ogsaydh way fududahay in lumiyo
2. Waxay ku fadhidaa qaybta kore ee quraaradda, saamaynteeda qurxintana way liidataa.
3. Qaybta kore ee aquarium-ka waa la degan yahay, oo rakibidda meesha laambadaha ku xaddidan.
4. Qaylada dheer
Miiraha kore waxaa lagula talinayaa inuu la xiriiro waxyaabaha soo socda
1. Aquarium-ka inta badan ka kooban kalluunka iyo haley
2. Aquarium oo leh kalluun weyn sida jirka ugu weyn
Isticmaalka shaandhada kore laguma talinayo xaaladaha soo socda
1. Canshuurta VAT
2. Isticmaalayaasha daneeya buuqa
Miiraha dibedda ayaa hakiya qaybta miiraha ee dhinaca ama kor. Biyaha waxaa lagu shubaa taangiga miiraha ee bamka quusin kara, laguna sifeeyaa walxaha miiraha, ka dibna wuxuu ku qulqulaa aquarium-ka.
2. Cabbir yar, fudud oo la dejiyo
3. Ma fadhiyo booska sare ee quraaradda, waxayna leedahay meel rakibida laambad badan.
4. Si fudud u nuugista ogsijiinta
1. Saamaynta sifeynta oo liidata
2. La xiriirida hawada inbadan, kaarboon laba ogsaydh way fududahay in lumiyo
3. Heerka biyaha oo kala duwan, badiyaa waxaa jira dhawaq faleebo ah
4. Qalabka miiraha ayaa u baahan in la beddelo waqti ka waqti.
Miirayaasha dibedda ayaa loo adeegsadaa falanqaynta soo socota
1. Waxaa loo isticmaalaa sidii quraaradda kor u qaadista dhirta yaryar ee biyaha ku jirta iyo kalluunka kulaylaha ee ka hooseeya 30cm
2. Isticmaalayaasha doonaya inay xakameeyaan kharashyada
Miirayaasha dibedda laguma talinayo xaaladaha soo socda
Aquarium weyn oo dhexdhexaad ah
Lagu dhisay filter
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee miirayaasha la dhisay
2. Mudnaan fudud
3. Ogsijiin ku filan
4. Waxaa lagu rakibay aquarium-ka mana fadhiisan doono banaanka
Faa'iido darrooyinka ku jira filter-ka
1. Kaliya ku habboon quraaradda yar
2. Saamaynta sifeynta oo liidata
3. Waxaa jira dhawaqa aeration
4. Qalabka miiraha ayaa u baahan in si joogto ah loo beddelo.
5. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelataa quruxda quraaradda
Miiraha la dhisay waxaa lagula talinayaa xaaladaha soo socda
Lagu dhisay miirayaasha laguma talinayo goorta
Aquarium ka badan 60 cm
2. Canshuuraha VAT
Shaandhada isbuunyada (ruuxa biyaha)
Filter Sponge waa nooc ka mid ah qalabka miiraha kaas oo u baahan inuu isku xiro matoorka oksijiinta iyo tuubada hawada, taas oo lagu xayeysiin karo darbiga aquarium-ka. Guud ahaan waxay ku habboon tahay dhululubbooyin yaryar waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa miiraayaal gacan-siiyayaal ah oo dhul-gooyo-dhexdhexaad ah.
Mabda'a waa in la isticmaalo saameynta soo saarista biyaha marka xumbada biyaha ay kororto, taas oo si wax ku ool ah u soo jiidan karta saxarada iyo sedka haraaga ah. Intaa waxaa dheer, bakteeriyada ku jirta suufka miiraha ayaa si wax ku ool ah u baabi'in kara walxaha dabiiciga ah, sidaas awgeedna lagu gaarayo ujeeddada biofiltration ee meel yar.
Waqtiga boostada: Sep-23-2020
Tel:0086 595 87298199
Whatsapp: +86 13599221865